Kitra – Fanomanana ny «Mondial 2018» : resin’ny Voromaherin’i Nizeria i Arzantina | NewsMada
Kitra – Fanomanana ny «Mondial 2018» : resin’ny Voromaherin’i Nizeria i Arzantina
Nanaitra an’izao tontolo izao, ny nandresen’ny Voromaherin’i Nizeria an’i Arzantina, teo amin’ny lalao ara-pirahalahiana, taranja baolina kitra. Vokatra izay mampiahiahy ny mpomba an-dry zareo Arzantin.
8 volana mialoha ny hanombohan’ny «Mondial 2018», tanterahina any Rosia, tsy mbola tena manana fahatokisana amin’ny Albiceleste, ny vahoaka Arzantin. Resin’ny Voromaherin’i Nizeria, tamin’ny isa mazava, 4 no ho 2, mantsy ry zalahy, nandritra ny lalao ara-pirahalahiana, notanterahina tao amin’ny kianja Krasnodar, Rosia ny talata 14 novambra, lasa teo. Fihaonana tsy nahitana an’i Messi. Na izany aza, efa nitarika tamin’ny isa 2 no ho 0 izy ireo no tratran’ny Nizerianina. Baolina nampidirin’i Ever Banega, teo amin’ny minitra faha-27 sy ny an’i Sergio Aguero, teo amin’ny minitra faha-36. Nampihena ny isa kosa i Iheanacho, teo amin’ny minitra faha-45, tamin’ny alalan’ny «coup franc». Tratry ny tsy fahasalamana tampoka i Aguero, teo am-pialan-tsasatra ka voatery nentina tany amin’ny hopitaly. Somary nampihena ny lalaon’ny Arzantin izany. Nosahalain’i Iwobi, izany teo amin’ny minitra faha-52 ary mbola nampian’i Idowu, 2 mn taorian’izay. Nofaranan’i Iwobi, indray ny baolina matin’i Nizeria, tany amin’ny minitra faha-73. Mbola manana fihaonana ara-pirahalahiana roa ny Albiceleste, mialoha ny “Mondial 2018” dia ny fifandonana amin’i Italia sy i Maraoka, ny volana marsa, ho avy izao.
Ankoatra izay, nisaraka ady sahala 2 no ho 2 ny Frantsay sy ny Mannschaft Alemaina. Fihaonana notanterahina tany amin’ny kianjan-dRainiboto. Ady sahala samy tsy nisy nitoko kosa ny fikatrohan’i Angletera sy i Brezila, natao tao amin’ny kianja Wembley.